စကားဝှက် em emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
စကားလုံး။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလှပသောဂိမ်းကိုနားလည်ရန်သင်သိထားသင့်သမျှကိုပြတော့မည်။ ယင်း၏အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်၊ ရင်းမြစ်၊ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ပဟေmodelsိပုံစံများနှင့်၎င်းကိုလျင်မြန်စွာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းစနစ်များမှဖြစ်သည်။
လုပ်ရန် လက်ဝါးကြီးအုပ် အွန်လိုင်းအခမဲ့, သင်ရုံရန်ရှိသည် ဤညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာပါ:
သင်ဆိုက်ထဲဝင်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်သာလုပ်သင့်သည် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာစကားနှင့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ရှာတွေ့နိုင်သောအမျိုးအစားများမှာ - သစ်သီးများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ တိရစ္ဆာန်များနိုင်ငံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်တေးဂီတများ
ယခုသင်အသုံးဝင်သောခလုတ်အချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ လုပ်နိုင်အသံထည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ"ခလုတ်ကိုပေးပါ"ကစား"ပြီးတော့ကစားနိုင်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ်"ခေတ္တရပ်နားသည်"နှင့်"ပြန်လည်စတင်ပါ"ဘယ်အချိန်မဆို မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့် သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက်ဂိမ်း.
ဂိမ်းတစ်ခုဖြည့်ပြီးနောက်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ထွက်ပေါက်ဂိမ်း" သည်အခြားစကားလုံးတွေလုပ်ဖို့။
စကားလုံးတစ်လုံးစတင်သောအခါသင်လုပ်သင့်သည်မှာပထမဆုံးဖြစ်သည် အပေါ်မှအောက်သို့သဲလွန်စတစ်ခုစီကိုဖတ်ပြီးရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းပါ။ တိကျတဲ့ ဦး တည်ချက်အတိုင်းဆက်လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ လက်ျာဘက်သို့အပြန်အလှန်သွားရမည်၊ ထို့နောက်တက်ဆင်းဆင်းတက်သည်။ သင်သိသောအဖြေတစ်ခုစီကိုသင်မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းသေချာနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်မေးခွန်းများကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းစွာရွေးချယ်ပြီးသူတို့ကိုဖြတ်ကူးခဲ့လျှင် အချို့သောအလွန်ရိုးရှင်းသောသေတ္တာများသည်သင့်ရှေ့မှောက်၌သင်သတိမပြုမိဘဲဖြတ်သန်းသွားသည်.
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စကားဝှက်ကိုအပြီးသတ်ပြီးပါကသင်မဖြေရှင်းနိုင်သေးသောခက်ခဲသည့်မေးခွန်းများကိုယခုသင်လုပ်သင့်သည်။ ဤသည်ကဤရင်ပြင်များအတွက်ခန့်မှန်းပိုမိုလွယ်ကူစေသည်နှင့်သင်ပိုမိုလွယ်ကူဒုတိယအကျော့စတင်နိုင်ပါသည်။
အခုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအဖြေများကိုသာပေးသောမေးခွန်းများကိုဖြေရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်ရှာနေလျှင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာမ်စား3အက္ခရာများနှင့်အတူ ၊ ကျွန်ုပ်၊ သင်၊ အမေရိကန်စသည်တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ပထမအကျော့နှင့်အက္ခရာတစ်လုံး၊ နှစ်လုံးပြီးအောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်အချို့သောရွေးချယ်စရာများကိုအမြန်ဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးကိစ္စတွင်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသာကျန်တော့သည်။
အကယ်၍ မေးခွန်းတစ်ခုအတွက်အဖြေရွေးချယ်ရန်များလွန်းနေပါကသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်အဖြေနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်မသေချာပါ။ ကလောင်အမည်နှင့်အတူ flimsily ဝေါဟာရကိုစမ်းပါ။ အကယ်၍ သင်ပဟေpိကိုဆက်လက်ဖြေရှင်းနေစဉ်တွင်သင်ရှာဖွေနေသည့်စာလုံးအတွက်နောက်ထပ်စာလုံးများထပ်မံတွေ့ရှိပါက၊ သင်၏ပထမဆုံးအတွေးမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သံသယဖြစ်ဖွယ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုအက္ခရာမျိုးစုံပေးသည်အထိတစ်ခါတစ်ရံစောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တစ်ခုသာဖြစ်ပါကဥပမာ၊ Y ​​ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နိုင်ခြေများလွန်း။ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သေးသည်။ ပိုကောင်းတဲ့အရာနဲ့အတူသင်ခဏစောင့်ပါ။ သင်လိုချင်သောစကားလုံးနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသေချာပါက၎င်းကိုသင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရှာဖွေနိုင်သည်။
၃။ break Take ယူပါ
အကယ်၍ သင်သည်စကားလုံးတစ်လုံးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမှီဝဲနေပြီးစကားလုံးအား ထပ်မံ၍ မသုံးနိုင်ပါကသင်မကြောက်သင့်ပါ ခဏနားပါ။ နက်နဲသောအရာကိုချန် ထား၍ ခေါင်းကိုရှင်းလော့။
မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မံဖတ်သည့်အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်၊ ရုတ်တရက်မည်သို့မည်ပုံအံ့သြသွားသည် မင်းအရင်ကပိတ်မိနေတဲ့အံ့သြစရာတစ်ခုပါ။ စကားလုံးတစ်လုံးကိုဖြေရှင်းရာတွင်အချိန်အချက်သည်အရေးမကြီးပါ။ အဓိကအချက်မှာစိန်ခေါ်မှုမှာဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်။
စကားလုံးပဟေeachိတစ်ခုစီတိုင်းတွင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်မရှိပါ။ နောက်ထပ် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတွင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထည့်သွင်းထားပါကမေးခွန်းနှင့်အဖြေများအချို့ကိုထိုအရာနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်.
ဒါကြောင့်ဒီဟာစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုအခြေခံတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်၊ ဥပမာနာမ်စားများ၊ အတိုကောက်များနှင့်အစရှိသဖြင့်သေးငယ်သောဖြည့်စွက်သောစကားလုံးများသည်ခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်အခြေခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ခေါင်းစဉ်တွင်ခရစ်စမတ်သို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီအခင်းအကျင်းတစ်ခုရှိပါကအက္ခရာ ၅ လုံးပါသောသစ်ပင်သည် OAK ထက် FIR ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည့်အဖြေများစွာရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုသင်ရှေ့သို့မရွှေ့နိုင်လျှင်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ၎င်းသည်သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
အ crosswords သူတို့ကမကြာခဏနိုင်ငံခြားဘာသာစကားများအတွက်စကားလုံးများကိုရှာဖွေရာတွင်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့်သင်သေချာစွာပြောနိုင်သည် အလွန်ခက်ခဲသောအဘိဓာန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်အခြားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ဘာသာစကားကိုယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်၏ဘာသာစကားသို့ရောက်နိုင်သောစကားလုံးများ။ သင်ရှာနေသောစကားလုံးအတွက်သေချာသည့်အက္ခရာများသေချာအောင်လုပ်ပါ၊ ထို့နောက်ခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်နိုင်သည် ဖြေရှင်းချက်ကိုမည်သည့်အပိုင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်ကိုအတိအကျကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်မေးခွန်းအမှတ်အသားကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည်အဆုံးသတ်ကိုလုံခြုံစွာရေးရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ကြိယာကိုရှာဖွေသောအခါသူတို့သည်များသောအားဖြင့်တူညီသောလမ်းကိုအဆုံးသတ်ကြသည်။ ဒါဟာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် အင်္ဂလိပ်အများကိန်းများ အကယ်၍ သင်သည်စကားလုံးတစ်လုံး၏အများကိန်းကိုရှာဖွေလျှင်၎င်းသည်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည် -is or -s
တဖကျတှငျ စကားလုံး၏နောက်ဆုံးအက္ခရာများကိုထည့်ရန်သင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သငျသညျစကားလုံးတစ်ခုလုံးကိုမသေချာရင်တောင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စကားလုံး၏အဆုံးမှာအက္ခရာအနည်းငယ်ပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြတ်ကူးသောစကားများပိုမိုခန့်မှန်းရန်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်သင့်တော်သောအဆုံးသတ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသေချာပါက၎င်းကိုဘောပင်နှင့်ယခုထည့်ပါ။
အချို့မေးခွန်းများနှင့်သင်တစ်ကြိမ်ထက်မကကြည့်ရှုရမည်။ ကောင်းပြီ စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်သူ့ဟာသူတောင်းဆိုပါ။ ပထမအချက်မှာမေးခွန်းတစ်ခုတွင်စကားလုံးတစ်လုံးကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့် Banco တွင်ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်တစ်ခုတွင်ဘာလုပ်နေတာလဲဟုသင့်ကိုမေးလျှင်၎င်းသည်ထိုင်ခုံဘဏ်နှင့်ဘဏ္corporာရေးကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ထိုအခါပြန်ကြားချက်နိုင်ဘူး "ထိုင်ပါ ကောင်းပြီပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ ".
မှတ်စုတစ်ခုအားနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဒီနေရာမှာတစ်ခါတလေတွေးတောဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ အမြဲတမ်းနှင့်အချိန်တိုင်းစကားလုံးများကိုမကြာခဏအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသောစကားလုံးများကိုမယူပါနှင့်၊ အခြားအဆင့်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားပါ။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ရောမသို့သွားရန်သင်တောင်းဆိုလျှင်လမ်းတစ်လမ်းသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်မဖော်ပြသင့်ပါ၊ သို့သော်အဖြေမှာအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်အားလုံးလမ်းများရောမမြို့သို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ".
8- ဘာမှမကူညီဘူး ...
သင်ယခုဤအကြံပြုချက်အားလုံးကိုလိုက်နာပြီးစကားလုံးအချို့နှင့်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကအချို့သောအကြံပြုချက်များကိုတောင်းခံရန်မလိုအပ်ပါ။ ထိုနည်းတူ၊ အကြံဥာဏ်တောင်းပါ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအချို့သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောအသိအကျွမ်းများသို့မဟုတ်ရိုးရာသို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ရည်ညွှန်းအလုပ်များကိုအသုံးပြုသည်။
ထိုနည်းတူ၊ အဘိဓာန်များ၊ အဘိဓာန်များသို့မဟုတ်စွယ်စုံကျမ်းများ၊ သူတို့ထဲကတစ်ခုကအိမ်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သွားနေပြီးစကားလုံးကိုမတူညီသောနေရာတွင်ဖြေရှင်းလျှင်သင်ပဟေaိအနေဖြင့်အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှုများစွာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်သည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုတွင်သင်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေသည် စကားလုံး.
အ crosswords သူတို့ဟာသင်နောက်ဆုံးဂိမ်းကိုအပြီးသတ်ရမယ်။ အခမဲ့အကြံပေးချက်များကို သုံး၍ စကားလုံးတိုင်းကိုရှာပါ။ စကားလုံးအချို့ပြီးစီးသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စာလုံးအချို့သည်အလိုအလျောက်ပေါ်လာပြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းသည်သတင်းစာများနှင့်ပြန်တမ်းများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်လည်းအောင်မြင်သည်။
La စကားလုံးအတိအကျနှင့်စကားလုံးအရေအတွက်အရအပြောင်းအလဲအခက်အခဲရှိသည်။ စကားလုံးများကို ဖြတ်၍ နည်းလေလေ၊ စကားလုံးများများများလေလေ၊ ဂိမ်းအတော်လေးခက်ခဲလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ရှုပ်ထွေးမှုအတိုင်းအတာသည်စကားဝှက်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အညီပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကစားရန်သင်ယူပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးသိရှိထားရမည်။
လက်ရှိစကားလုံးဝေါဟာရများရှိသည် လူကြိုက်အများဆုံးဝါသနာတစ်ခုသူတို့လိုပဲအခြားဂိမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌မြေပြင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပေမယ့် sudoku။ ဝါသနာပါသည့်ကဏ္ one တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောစကားလုံးများအားနည်းချက်များပါ ၀ င်သည့်သတင်းစာများ၊ သို့သော်မည်သည့်အချိန်၌စတင်ခဲ့သနည်း။
El ပထမစကားလုံး ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ တစ်ဆယ့်ကိုးရာတစ်ဆယ့်သုံးရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် တနင်္ဂနွေနယူးယောက်ကမ္ဘာ့ဖလား "လို့ခေါ်တဲ့ပဟေိတစ်ခုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်စကားလုံး"ဖွံ့ဖြိုးပြီး အာသာ Wynneလီဗာပူးလ်မှအင်္ဂလိပ်သမိုင်းဆရာ။ အဆိုပါပဟေuzzleိသည်အများပြည်သူနှင့်ချက်ချင်းထိမှန်ခဲ့ပြီးထုတ်ဝေမှုအတွက်အပတ်စဉ်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယင်း၏အောင်မြင်မှုရှိသော်လည်း ၁၉၂၄ ခုနှစ်အထိဤပဟေpိကိုထုတ်ဝေရန်တစ်ခုတည်းသောသတင်းစာသည်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်သည်ထိုအချိန်တွင်အစပြုသူတစ် ဦး ကကမ္ဘာ့အချိန်ကာလကျော်ကထုတ်ဝေသောဝေါဟာရများအပြည့်အစုံကိုစာအုပ်ပုံစံဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ရှိမုနျကို & Schuster ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကြေညာသူတစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်သည့်မိုက်မဲမှုအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစကားလုံးဘုတ်အဖွဲ့- r square square square square 'square square square square square square square square square square square square square - square square square square square square - - - - - - -
စကားလုံးပဟေofိ၏ရှေးအကျဆုံးဘိုးဘေးဘီဘင် (Thebes) တွင် ၁၉ ရာစုဖာရာမင်း (ရာစုနှစ် ၁၃၂၀ မှရာမစ် ၂) ရာမစ်နန်းစံပထမနှစ်အတွင်းထိုအရာကိုခန့်အပ်ရန်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနေဗဝင်ဖန်း၏သင်္ချိုင်းဂူတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် ခရစ်တော်မတိုင်မီနှစ်ရာ) ။ သင်္ချိုင်းအတွင်းခန်းသို့ပို့ဆောင်သည့်စင်္ကြံ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်၊ လူ့ပုံရိပ်များနှင့်အရုပ်နှင့်ဆက်တိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကျောက်တုံးကြီး.
ထိုစာသားထဲတွင်ကွယ်လွန်သူကိုကာကွယ်သည့်ဘုရား Osiris အကြောင်းချီးမွမ်းထိုက်သောဆုတောင်းချက်များသာပါ ၀ င်သည်။ နောက်ထပ် သင်္ချိုင်းဂူများစီစဉ်ထားပုံကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များအံ့သြခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်းအလျားလိုက်လိုင်း ၁၁ ခုရှိသည်။ သူတို့အလယ်တွင်ရှိသည့်တိုင်ရုပ်ပုံများသည်ဒေါင်လိုက်ဖတ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်းထောက်ပြရန်ကော်လံတစ်ခုကိုအမှတ်အသားပြုခဲ့သည်။
စကားဝှက်သည်မတူညီသောအမျိုးအစားများရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံး၊ အထင်ကရ၊ အမည်ခံ၊ အနှုတ်လက္ခဏာ၊ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ "ရိုးရှင်းသော" အဆင့်နှင့်အတူစကားလုံးများတွင် အမည်ခံအဓိပ္ပါယ်, ဗေဒင်တွက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်။ "အတော်လေးခက်ခဲတဲ့" အဆင့်ရှိသူများအတွက်အခြေအနေပြောင်းပြန်ပြောင်းသည် ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါအားဖြင့်အဓိပ္ပါယ်အမည်ခံအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်.
သို့ရာတွင်၊ စကားလုံးဝေါဟာရများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ သူတို့ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ဤသည်စကားလုံးတစ် ဦး သင်ယူဖို့ရည်ရွယ်သည် ဘာသာစကားအသစ်.
၎င်းသည်ပုံစံတစ်မျိုးစီဖြစ်ပြီး box တစ်ခုချင်းစီကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည် တစ်ခုတည်းသောစာတစ်စောင်အစား syllable ။
ဒီစကားလုံးဝေါဟာရသည်ယနေ့လူကြိုက်များသည်။ ပါဝင်သည် အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မျိုးစုံရှိရာဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ၏ဓာတ်ပုံ တူညီသော၏နာမကိုအမှီသို့မဟုတ်အမည်များနှင့်ကိုက်ညီ။
ဒီရှုပ်ထွေးသောပုံစံ၌တည်၏ ဝါကျ၏စကားများအကြားဖြေရှင်းချက်ကိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုဖုံးကွယ်ထားသောဝါကျကိုအသုံးပြုသည်။ ဗြိတိန်တွင် The Times မှစကားလုံးဝေါဟာရသည်ထူးခြားသည်။